!! #ကုလားရှိရင် မုဒိမ်းရှိမယ်(၉)” #U #WIRATHU | democracy for burma
tags: “ကုလားရှိရင် မုဒိမ်းရှိမယ်(၉)”, Burma, Myanmar, Rape, U Wirathu
မွတ်ကုလားတစ်ယောက်တည်းက ဗမာမိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို အကြိမ်ကြိမ် အနိုင်ကျင့်တဲ့ ဖြစ်ရပ်ပါ။
အလုပ်ရှင် မွတ်ကုလားက အလုပ်သမလေးကို မုဒိမ်းကျင့်တာ(ပထမအကြိမ်လုပ်ငန်းခွင်မှာ)
တိုင်ရင် တစ်မိသားစုလုံးကို သတ်ပစ်မယ်လို့ ခြိမ်းခြောက်ထားလို့ မတိုင်ရဲဘဲ ကိုယ်ရောင်ဖျောက်ခဲ့ရတာပါ။
ကုလားက အနံ့ရသွားပြီး လုပ်ငန်းကအပြန် စက်ဘီးစီးလာတဲ့ ဒီကောင်မလေးကိုပဲ ဓားထောက်မုဒိမ်းကျင့်တာ က ဒုတိယအကြိမ်။
တတိယအကြိမ်မှာ မအောင်မြင်တော့ ထိုးကြိတ်ကန်ကြောက် ကိုင်ရိုက်ပစ်ဆောင့်ရုံနဲ့ အားမရဘဲ နောက်ကျော ဓားနဲ့ထိုးပြီး ၁၃ သိန်းအလျော်ပေးခဲ့တာလည်း ဒီကုလားပါပဲ။
စတုတ္ထအကြိမ်မှာတော့ အိမ်ထဲထိ တက်ပြီး အုပ်စုဖွဲ့ အနိုင်ကျင့်တဲ့အပြင် ခြိမ်းခြောက်ဆဲဆိုကာ ပတ်ဝန်းကျင်ကို လင်မယားထင်အောင် လှည့်စားခဲ့တာလည်း ဒီကုလားပါပဲ။
ပဉ္စမအကြိမ်(နောက်ဆုံးအကြိမ်)မှာတော့ အိမ်ပေါ်ထိတက် ဝတ်ထားတာတွေ အကုန်ဆွဲချွတ် ဆွဲဖြဲ လည်ပင်းညှစ်ပြီး မုဒိမ်းကျင့်ဖို့ ကြံစည်တာလည်း ဒီကုလားပါပဲ။
အော်သံကြားလို့ ဝင်ရောက်ကူညီသူ ကိုကျော်နိုင်နှင့် ဦးမြင့်လွင်(ရယက)ကို ရိုက်ခွဲပစ်တာလည်း ဒီကုလားပါပဲ။
ဒီကုလားရဲ့ နာမည်က ဝင်းဟန်(၅၅)နှစ်၊ မန္တလေး ပြည်ကြီးတံခွန်မှာ နေပါတယ်။ သားသမီးနှစ်ယောက်နှင့် မြေးတစ်ယောက်ရှိပါတယ်။
ကုလားလွယ်အိတ်ထဲက ဖမ်းမိတဲ့ အက်စစ်ပုလင်းနှင့် သက်သေပစ္စည်းကို ဒုရဲအုပ်ခင်ကိုကိုနှင့် ဒုရဲအုပ် စိုးနိုင်ထွန်းက ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့ပါတယ်။
ဖြူဖြူမောင်တိုင်ကြားလို့ (ပ)၂၄၀/၂၀၁၄ ပုဒ်မ ၃၇၆/၅၁၁ အမှုနှင့် ရဲက အမှုဖွင့်ကာ ခရိုင်ဥပဒေအရာရှိက (၃၇၆/၅၁၁)(၄၅၁)(၃၂၃) တို့ဖြင့် အရေးယူခဲ့တာကို နေပြည်တော်ကဟုဆိုကာ အမှုတွဲလာယူသွားပြီး အစဖျောက်ပစ်လိုက်တာကြောင့် ဖြူဖြူမောင် နစ်နာပြီးရင်း နစ်နာခဲ့ပါတယ်။
ကုလားဝင်းဟန်ရဲ့ အစ်ကိုဝမ်းကွဲ ဦးမြင့်စိုးက ပျော်ဘွယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပါ။
တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ အသနားခံစာများ စီစစ်ဆောင်ရွက်ရေးကော်မတီအဖွဲ့ဝင်ပါ။ ဗမာ/ဗုဒ္ဓယောင်ဆောင်ပြီး ဝင်ပူးထားတာပါ။
အဲဒီ မြင့်စိုး အမိန့်နဲ့ အမှုကိုဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့တာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
အခုတော့ မန်း မဘသ ထံ မိန်းကလေး ဖြူဖြူမောင် ရောက်ရှိလို့လာပါပြီ။ ရဲတပ်ဖွဲ့မှူးတွေနှင့် ချိတ်ဆက်ပြီး စီစဉ်နေပါတယ်။ မနေ့က(17.5.2015) ရက်နေ့မှာ အမှုထပ်ဖွင့်ပါတယ်။
ဒီနေ့(18.5.2015)ရက်နေ့ မနက် 06:45 နာရီမှာ မိန်းကလေး ဖြူဖြူမောင်အိမ်ကို ရဲတွေဝင်စီးပါတယ်။ သတင်းအရဆိုပြီး ဝင်ရှာကြတာ နယ်ခံရပ်ကွက်လူကြီးတောင် မသိလိုက်ရပါဘူး။
ဒုရဲမှူး လှလွင် ဦးစီးတဲ့ မူးယဇ်တပ်ဖွဲ့ရဲ၉ယောက်က ဝင်စီးခြင်းဖြစ်ပါတယ်။
ရှာဖွေဝရမ်းလည်းမပါ။ နယ်ခံလူကြီးလည်း မပါဘဲ အပြစ်မဲ့ ပြည်သူ မိန်းကလေးတစ်ယောက်ကို ရဲဝန်ထမ်းများက ကုလားစေခိုင်းတဲ့အတိုင်း အနိုင်ကျင့်ခဲ့ကြတာပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
ဘာမှ မတွေ့ရလို့ တော်သေးတာပါ။
ရဲတွေကိုယ်တိုင် ဘိန်းဖြူယူလာပြီး ရှာဖွေပုံစံနဲ့ ဖမ်းမိပါတယ်လို့ မလုပ်ကြံတာကိုပဲ ကျေးဇူးတင်ရမလို ဖြစ်ခဲ့တာပါ။
လွှတ်တော်အမတ်ကိုယ်တိုင်က အမှုကို ဖျောက်ဖျက်ပစ်ခဲ့တာပါ။
ရဲတွေကပဲ ကုလားနဲ့ပေါင်းပြီး အဂတိလိုက်စားနိုင်မလား?
ကုလားမြင့်စိုးကပဲ အမှုကို ဆက်လက်ဖျောက်ဖျက်ပစ်နိုင်မလား? ဆိုတာကို ကောင်းကင်ပြာပေါ်မှာ ဆက်လက် ရှုစားနိုင်ပါတယ်။
နေ့စွဲ။ ။ ၁၇.၅.၂၀၁၅ တနင်္ဂနွေနေ့။
အကြောင်းအရာ။ ။ အိမ်ထဲသို့ ကျူးကျော်ဝင်ရောက်ပြီး အလိုမတူဘဲ အတင်းအဓမ္မ ပြုကျင့်မှုအား ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါရန် တင်ပြခြင်း
အထက်ပါအကြောင်းအရာကိစ္စနှင့်ပတ်သက်၍၊ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး၊ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ်၊ တပ်မတော်ပရိ ဘောဂစက်ရုံ၊ အိမ်ထောင်သည်လိုင်း၊ တိုက်ခန်းအမှတ်(၅၄)၌ နေထိုင်သော ကျွန်မဖြူဖြူမောင်က အောက်ပါအတိုင်း အဖြစ်မှန်ကို တင်ပြပြီး ယုံကြည်အားကိုးစွာ တင်ပြတိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် တပ်မတော် ပရိဘောဂစက်ရုံဝန်းနေ ကျွန်မမဖြူဖြူမောင်သည် လွန်ခဲ့သော ၁၃၆၄ ခုနှစ်၊ တပို့တွဲလပြည့်ကျော်(၂)ရက် ၂၈-၂-၂၀၁၃(အင်္ဂါနေ့)တွင် အိမ်ထောင်ကျခဲ့ရာ ယခုသားတစ်ယောက် (၁၁)နှစ်ခန့် ရှိပါပြီ။ လွန်ခဲ့သော(၃၊၄)နှစ်ခန့်က စားဝတ်နေရေးအဆင်မပြေ၍ တံခွန်တိုင်ဈေးတန်းရပ်နေ ဦးဝင်းဟန်၏ နေအိမ်တွင် ပုလင်းအဖုံးလုပ်ငန်းသွားရောက်လုပ်ကိုင်ခဲ့ရာ(၁)ရက်ကို(၆၀၀၀ိ/-)ကျပ်ကျော် ရရှိခဲ့ ပါသည်။ ၄င်းထံအလုပ်လုပ်၍ (၂)ပတ်ကျော်ကြာပြီးနောက်(၁)ရက်သောနေ့တွင်(အလုပ်ရှင်)မွတ်ဆလင် ဘာသခြား ဦးဝင်းဟန်မှ ကျွန်မကို ဒီနားခဏလာအုံးဟုခေါ်ကာ ကျွန်မလည်း သာမန်သဘောရိုးဖြင့် အလုပ်ခိုင်းမည်ဟုမှတ်၍ နောက်ဖေးစတိုခန်းသို့ဝင်သွားရာ အတင်းအဓမ္မဆွဲလှဲ၍ ပါးစပ်ကို လက်ဖြင့်ပိတ်၍ ဓားနဲ့ထောက်ပြီး အလိုမတူ အတင်းအဓမ္မပြုကျင့်ခဲ့ပါသည်။ ပြီးနောက် သူက နင်ဘယ်မှမတိုင်နဲ့ တိုင်လျင် နင့်အိမ်က တစ်မိသားစုလုံးခေါ်ပြီး တစ်ယောက်ချင်းသတ်ပြစ်မယ်။ နင့်အိမ်ထောင်ရေးလည်း ပြိုကွဲစေမယ်။ နင်လည်းအရှက်ကွဲသွားမယ်ဟု(ဘာသာခြား)ဦးဝင်းဟန်မှ ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။
အလုပ်ရှင်နှင့် အလုပ်သမားဖြစ်ခြင်းကြောင့် ကြောက်ရတာရယ်။ မိသားစုဝင်တစ်ယောက်ခြင်း ဖမ်းဆီးသတ် ဖြတ်မည်ကိုစိုးရွံ့ခြင်း၊ မိသားစုပြိုကွဲသွားမည်စိုးရိမ်ကြောင့်ကြခြင်း၊ လူမမယ်သားလေးကို ကျွန်မကွယ်ရာတွင် ခေါ်ဆောင်သတ်ပစ်မည်ကို ကြောက်တာရယ်ကြောင့် ဘယ်မှမတိုင်ရဲပါ။ အဲဒီအဖြစ်ဆိုးကြီးကို ကျွန်မတစ် ယောက်တည်း ကြိတ်ခံစားခဲ့ပါသည်။ အဲဒီနောက် ကျွန်မသည် အခြားနေရာ၌ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် ခဲ့ပါသည်။ မန်းမြို့ဈေး ရတနာပရိဘောဂဆိုင်မှာ ကော်ပတ်စား၊ ဆေးသုတ်ဘဝနဲ့ သွားရောက်အလုပ်လုပ်ကိုင် ခဲ့ပါသည်။ လအနည်းငယ်ကြာပြီးနောက် ကျွန်မအလုပ်လုပ်သည့်နေရာကို ဦးဝင်းဟန်စုံစမ်း၍ လိုက်လံ နှောင့်ယှက်ခဲ့ပါသည်။ ဆောင်းတွင်းပိုင်း ညနေ(၆)နာရီအလုပ်ပြန်လာသည့်အချိန် ဦးဝင်းဟန်(ဘာသာခြား) သည် အခြားအဖော်တစ်ယောက်နှင့်အတူ ရောက်လာပြီး ကျွန်မအား စက်ဘီးပေါ်မှဆွဲချခဲ့ပြီး မအော်နဲ့ အော်ရင် သတ်မှာဟုလည်း ပြောဆိုခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မ၏ ညာဘက်ခါးကို အသင့်ပါလာသော ဓားဖြင့်ထောက် ၍ သူ၏အဖော်ဖြစ်သူ ဘာသာခြားက ကျွန်မစက်ဘီးကိုယူသွားပြီး ဦးဝင်းဟန်က သူ့ဆိုင်ကယ်ပေါ်သို့ ဆွဲတင်ခဲ့ ပါသည်။ ကန်တော်ကြီးတစ်နေရာလမ်းဘေး၌ အလိုမတူဘဲ သားမယားအဖြစ် နောက်တစ်ကြိမ်ပြုကျင့်ခဲ့ပါ သည်။
ဦးဝင်းဟန်မှ ကျွန်မအား အမြဲခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခဲ့ပြီး လိုက်လံနှောင့်ယှက်နေပါသည်။ ကျွန်မမှာ မိခင်ဖြစ်သူ ရောဂါသည်ဖြစ်နေသည်ကတစ်ကြောင်း၊ တစ်ဦးခြင်းသတ်ပြစ်မည်ဟု အကြိမ်ကြိမ် ခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုခံရမှု များကြောင့် မိခင်ကြီးကိုလည်း မပြောရဲ အဖြစ်ဆိုးကြီးကို ကြိတ်ခံစားခဲ့ပါသည်။ အဲဒီနောက် လအနည်းငယ် ကြာ၌ ဘုရားကြီးညောင်ကန်ကျောင်းတိုက်၌ ကွန်ပျူတာသင်တန်းတက်ရောက်ခဲ့ပါသည်။ (ဘာသာခြား)ဖြစ်သူ ဦးဝင်းဟန်သည် ကျွန်မသင်တန်းနေရာကိုစုံစမ်း၍ ရောက်ရှိလာခဲ့ပါသည်။ သင်တန်း အပြန်လမ်းတစ်နေရာတွင် ညနေပိုင်း ၆ နာရီကျော် ၇-၆-၂၀၁၃ ရက်နေ့ ဦးပွားဂုံးကျော်အနီး ကျွန်မအား ငါနဲ့လိုက်ခဲ့ဟုခေါ်ပါသည်။ ကျွန်မလည်း မလိုက်နိုင်ဘူး။ သတ်ချင်သတ်ပစ်လိုက်။ အဲဒါဆို ငါ့မှာ ပုဆိုးအပိုပါတယ်။ နင့်ကို ခုတ်ထစ်ပြီး ဒီပုဆိုးထဲထည့်ထုတ်မယ်။ ကျွန်မလည်း ခုတ်ချင်လည်းခုတ်လိုက်တော့ဟု ပြောနေစဉ် ကျွန်မအား ဘာသာခြား ဖြစ်သူ ဦးဝင်းဟန်က လက်သီးဖြင့် အကြိမ်ကြိမ်ထိုးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မနောက်ပြန်လဲသွားစဉ် ကျွန်မဆံပင်ကိုဆွဲ ၍ အနီးရှိအုတ်နံရံဖြင့် ခေါင်းကိုအကြိမ်ကြိမ်စောင့်တိုက်ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် သူ့အိတ်ထဲမှ အသင့်ပါလာသော ဓားဖြင့် ကျွန်မ၏ဝဲဘက်နောက်ကျောကို ထိုးခဲ့ပါသည်။ ကျွန်မ အကြိမ်ကြိမ်အော်ဟစ်အကူအညီတောင်းခံမှု ကြောင့် အနီးဝန်းကျင် ဖြတ်သန်းသွားလာသူများ ဝိုင်းအုံကြည့်ရှုနေခြင်းကြောင့် ဦးဝင်းဟန်(ဘာသာခြား)မှာ ကျွန်မ၏ ဆိုင်ကယ်သော့အား ဆိုင်ကယ်မှ နှုတ်ယူထွက်ပြေးသွားခဲ့ပါသည်။
အဲဒီနောက် ၇-၆-၂၀၁၃ ရက်တွင် အမှတ်(၁၁)ရဲစခန်း၌ တိုင်ကြားခဲ့ရာ ခံဝန်လက်မှတ်ထိုးပြီး ရဲစခန်းမှ (ဘာသာခြား)ဦးဝင်းဟန်အား လွှတ်ပေးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအမှုဖြစ်ပွားရာကိစ္စရပ်များအတွက် ကြေအေးပေးပါ ရန် နောက်နောင် ထပ်မံ၍ ပြဿနာမပြုလုပ်တော့ပါကြောင်းကို ဝန်ခံကတိပြု၍ ကျွန်မအား ဆေးကုသရန် အတွက် ငွေကျပ်(တစ်ဆယ့်သုံးသိန်းကျပ်)တိတိကို သက်သေများ၏ရှေ့မှောက်၌ လက်မှတ်ရေးထိုးပေးခဲ့ပါ သည်။ အဆိုပါအမှုအား ကျွန်မမှာ ငွေကြေးမပြည့်စုံခြင်း၊ ဦးဝင်းဟန်မှ အမြဲခြိမ်းခြောက်ပြောဆိုမှုများကြောင့် ကျွန်မမိသားစုဘဝပြိုကွဲမည်စိုးပါသောကြောင့် ဓားထိုးခံထားရသည့်အမှုအား ကြေအေးပေးခဲ့ပါသည်။ ဤအမှု ဖြစ်စဉ်၌ ကျွန်မသည် ငွေသိန်း(၃၀)ကျော် ကုန်ကျခဲ့ပါသည်။ ဤအမှုဖြစ်စဉ်တွင်ပါရှိသည့် မန္တလေး အထွေထွေ ရောဂါကုဆေးရုံကြီးမှ ဆေးစစ်ချက်(ဆေးစာ)နှင့် ကြေအေးလွှာစာချုပ်တို့အား အထက်မြန်မာပြည် (မ.ဘ.သ) ရုံးမှ ဆရာတော်များထံတွင် ဤစာနှင့်တကွ တင်ပြထားပါသည်။ ၂၀၁၄ ခုနှစ် ၆ လပိုင်း ၇ ရက်နေ့ မွန်းလွဲ ၂ နာရီတွင် ကျွန်မပိုင်ဆိုင်သော သံလျက်မှော်တောင်ရပ်ကွက် အကွက်(၄၄၇)ကန်တော်ကြီးအရှေ့ခြမ်းနေအိမ်၌ တစ်ယောက်တည်းရှိနေစဉ် ယခင်က ပြဿနာရှိခဲ့ဖူးသူ(ဘာသာခြား)ဦးဝင်းဟန် ထပ်မံရောက်ရှိလာပြီး ၄င်း၏ အဖော်(၄)ဦးနှင့်အတူ ဒေါ်ဖွားရင်ဆိုသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦးလည်း ပါလာသည်။ ကျွန်မအား ငါ့ကို တံခါးဖွင့်ပေး စမ်း ဖာသည်မ။ ဖာခံနေတာလား။ တံခါးဖွင့်ပြီးထွက်လာခဲ့ နင်ထွက်လာရင် နင့်မျက်နှာကို အက်စစ်နှင့် ပတ်ပစ်မယ်။ အရင်တစ်ခါဓားနဲ့ထိုးတာ မမှတ်သေးဘူးလား။ နင့်မိသားစုအားလုံး တစ်ယောက်ချင်းဆီ သတ်ပစ်မယ်ဟု ခြိမ်းခြောက်ခဲ့ပါသည်။ ပတ်ဝန်းကျင်မှ လူများကမေးတော့ လင်မယားပါဟု ကျုပ်မိန်းမကို ကျုပ်လာခေါ်တာဟုပြောပြီး အရှက်ခွဲသွားပါသည်။ သူပြန်ပြီး ချက်ချင်းပင် အနီးပတ်ဝန်းကျင် သက်သေများခေါ် ၍ အမှတ်(၁၀)အပိုင် ရဲစခန်းကို အမှုဖွင့်ခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအမှုအား ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် တရားရုံးတော်၌(ဘာသာခြား)ဦးဝင်းဟန်နှင့် အပေါင်းပါတို့အား (ဒုရဲအုပ်)စိန်လင်းမှ ပြစ်မှုဆိုင်ရာဥပဒေပုဒ်မ ၂၉၄/၅၀၆ ဖြင့် စွဲဆိုတင်ပို့ခဲ့ပါသည်။ ထိုသို့ အမှုရင်ဆိုင်နေစဉ် (၂)လအတွင်း(၃၁-၇-၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် ကျွန်မပိုင်ဆိုင်သော ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သံလျက်မှော်တောင် ရပ်ကွက်ရှိအိမ်တွင် ကျွန်မတစ်ယောက်တည်းရှိနေစဉ် ခြံတံခါးတွန်းလှဲ၍ နင်မအော်နဲ့ ဟုဆိုကာ ကျွန်မအော်၍ အကူအညီတောင်းရာ ကျွန်မလည်ပင်းကိုညှစ်ပြီး ထမိန်၊ အင်္ကျီများ ဆွဲချွတ်ခဲ့ပါသည်။ အင်္ကျီများလည်း ဆုတ်ပြဲ သွားခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ရုတ်ရင်းဆန်ခတ်ဖြစ်ပြီး ထပ်မံအော်ဟစ် အကူအညီတောင်းခံမငကြောင့် ရပ်ကွက် အနီးဝန်းကျင်မှလူများ ဝိုင်းဝန်းရောက်ရှိလာပြီး ရပ်ကွက်အတွင်းမှ ဦးကျော်နိုဆိုသည့် ဆေးဆရာမှ အရင်ရောက်၍ ဝင်ဆွဲရာတရားခံဦးဝင်းဟန်(ဘာသာခြား)မှ အနီးနားရှိ ဒုတ်ဖြင့် ရိုက်လိုက်ရာ ဦးကျော်နိုင်မှာ မျက်နှာတစ်ခြမ်း ဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပါသည်။ ၄င်းဦးဝင်းဟန်(ဘာသာခြား)အား ဝိုင်းဝန်းဖမ်းဆီးကာ ၄င်းတရားခံပါစပ် မှ ဒါငါ့မိန်းမဟုဆိုကာ လူတွေကိုလည်း ထိုးနှက်ခဲ့ရာ မျက်မြင်သက်သေများနှင့်တကွ ရပ်ကွက်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး နှင့် ၄င်း၏ ဇနီးတို့ကိုယ်တိုင်လည်း မြင်တွေ့ခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် အမှတ်(၁၀)ရဲစခန်းသို့ ဆက်သွယ် အကြောင်းကြားကာ ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်စိုးနိုင်ထွန်းနှင့်အဖွဲ့ရောက်ရှိလာရာ သက်သေများရှေ့တွင် ဦးဝင်းဟန် ပါလာသော အိတ်ကိုဖွင့်ကြည့်စစ်ဆေးရာ မှတ်ပုံတင်နှင့်တကွ စာရွက်စာတမ်းများ၊ ပိုက်ဆံများနှင့်အတူ ၄ လက်မခန့် လစ်ပိုပုလင်းလေးထဲတွင်(အက်စစ်)ရည်များ ထည့်ပါလာသည်ကို သက်သေများရှေ့တွင် ရှာဖွေ တွေ့ရှိခဲ့သည်။ ထို့အပြင် ၄င်းအိတ်နှင့်အတူ တစ်ပေခွဲခန့်ရှိ တုတ်တိုတစ်ချောင်းကိုယူဆောင်လာကြောင်းလည်း မျက်မြင်တွေ့ရှိ၍ တာဝန်ရှိသူများထံ အပ်နှံခဲ့ပါသည်။
အဆိုပါအမှုကို ကျွန်မဖြူဖြူမောင်မှ တရားလိုပြုလုပ်တိုင်ကြားအမှုဖွင့်ခဲ့ရာ ၃၁-၇-၂၀၁၄ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ထိုနေ့ ညနေ (၄)နာရီအချိန်တွင် တရားခံ ဦးဝင်းဟန်အား(အာမခံ)ဖြင့် လွှတ်ပေးခဲ့ပါကြောင်း သိရသည်။ အမှတ်(၁၀)ရဲစခန်းမှ အမှုတွဲတင်အကြံပေးတောင်းခံသည့်နေ့မှာ ၁၈-၈-၂၀၁၄ ရက်နေ့ဖြစ်ပါသည်။ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဥပဒေရုံးမှ ထပ်မံစစ်ဆေးခိုင်းသဖြင့် အမှတ်(၁၀)ရဲစခန်းမှ ဒုရဲအုပ်စိုးနိုင်ထွန်းမှ (၁၇-၉-၂၀၁၄)နေ့တွင် ကျွန်မအားလိုအပ်သည်များကို ထပ်မံခေါ်ယူစစ်ဆေးခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအမှုဖြစ်ပြီးသည့်အချိန်တွင် ကျွန်မ၏မိခင်နှင့်အတူ ပြည်ကြီးတံခွန်မြို့နယ် ဈေးတန်းရပ်နေအိမ်၊ အမှတ်(၃၂၄)နေ ဦးပေါ်ဒင်၏သားဖြစ်သူ (တရားခံ)ဦးဝင်းဟန်၏ နေအိမ်အနား ပေ(၂၀)ခန့်အကွာတွင် ရပ်၍ ၄င်း၏ဇနီးအားလှမ်း၍ခေါ်ကာ သူ၏ယောက်ျားအား ပြောဆိုဆုံးမပေးရန် ကျွန်မအားလိုက်လံမနှောင့်ယှက်ရန် ဆွေးနွေးခဲ့ပါသည်။ ဤသို့ပြော ဆိုပြီး နောက်ရက်တွင် ကျွန်မအား (တရားခံ)ဦးဝင်းဟန်မှ ပြည်ကြီးတံခွန်ရဲစခန်းတွင် ပိုက်နက်ကျူးကျော်မှု တို့ဖြင့် ပြန်၍တရားစွဲဆိုခဲ့ပါသည်။ ၄င်းအမှုအား တရားရုံးမှ ၅-၅-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် ဘာသာခြား ဦးဝင်းဟန် ဘက်မှ သက်သေမခိုင်လုံသဖြင့် လိမ်လည်တိုင်ကြားခြင်းပေါ်လွင်နေပါသဖြင့် တရားရုံးမှ အပြီးအပိုင် ပယ်ချခဲ့ ပါသည်။
ထို့နောက် ကျွန်မတိုင်ကြားထားသည့် ၃၁-၇-၂၀၁၄ လက်ကျန်အမှုတွဲကို ၂၁-၁-၂၀၁၅ ရက်နေ့တွင် နေပြည်တော်မှ တောင်းယူကြည့်ရှုနေသည်ဟု မန္တလေးမြို့ ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် ဥပဒေရုံးမှ (တာဝန်ခံ) ဦးလှမျိုးအောင်မှ ပြောဆိုခဲ့ပါသည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်မဖြူဖြူမောင် ကိုယ်တိုင်အမှုဖွင့်တရားစွဲဆိုခဲ့သော ပြစ်မှုပုဒ်မ(၃၇၆/၅၁၁)၊(ပ/၂၄၀/၂၀၁၄)အမှုသည် ပြန်လည်ကျရောက်လာခြင်းမရှိဘဲ ကျန့်ကြာခဲ့ပါသည်။
ယခုအဆိုပါကိစ္စကို ကျန့်ကြာအောင်ပြုလုပ်ထားကြောင်း စုံစမ်းသိရှိရသည်မှာ တရားခံဦးဝင်းဟန်ဆိုသူသည် ၄င်း၏အကိုတော်စပ်သူ ပျော်ဘွယ်မြို့ ပြည်သူ့ကိုယ်စားလှယ်၊ ပြည်သူ့လွှတ်တော်တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာစိစစ်ရေးဌာနမှ ဦးမြင့်စိုးနှင့်ပူးပေါင်း၍ မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ဥပဒေရုံးရှိ တာဝန်ရှိလူကြီးများအား ပြောဆိုပြီး ကျန့်ကြာအောင် ပြုလုပ်ဆောင်၇ွက်ထားကြောင်း သိရပါသည်။
၄င်းနောက်လည်း အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် ပါဝင်သော ဒုရဲအုပ်နယ်ထန်းခေါင်းဆောင်(ခင်ကိုကို)နှင့် ဒုရဲအုပ်စိုးနိုင် ထွန်းတို့သည်လည်း အခင်းဖြစ်ပွားရာ၌ စစ်ဆေးတွေ့ရှိရသော ဦးဝင်းဟန်၏ ဘေးလွယ်အိတ်နှင့်(၄)လက်မခန့် ရှိသော တုတ်တိုတစ်ချောင်းကို ၄င်းအရာရှိတို့မှ ဖျောက်ဖျက်ထားပြီး အမှုတွဲတင်ပြရာတွင် ထည့်သွင်း ဖော်ပြထားခြင်းမရှိဘဲ ဖျောက်ဖျက်ထားပါသည်။ အဆိုပါအမှုအား မျက်မြင်သက်သေများစွာ ပါဝင်သိရှိပါသည်။
၄င်းအမှုတွင် ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ် သံလျက်မှော်အနောက် အကွက်(၄၄၇)မှ ဥက္ကဋ္ဌနှင့်(၁၀)အိမ်မှူး၊ ရပ်ကွက်အတွင်း လူ(၂၀)ခန့်လည်း အဆိုပါအက်စစ်နှင့် ပစ္စည်းများကိုလည်း မြင်တွေ့ခဲ့ရပါသည်။ ထိုသို့ အကျင့်ပျက်လာဘ်စားထားသော(ရဲ)အရာရှိများနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး၊ ဥပဒေရေးရာတိုင်ကြား စာ စိစစ်ရေးဌာနမှ(ဦးမြင့်စိုး)တို့မှ တရားခံနှင့်ပူးပေါင်း၍ အမှုကျန့်ကြာအောင် ပြုလုပ်ထားသော ဥပဒေဝန်ထမ်း များအား အရေးယူပေးပါရန် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။ အဆိုပါ သက်သေခံပစ္စည်းများကို အကွက်(၄၄၇)ဥက္ကဋ္ဌ ဦးမြင့်လွင်မှ ရဲအရာရှိများကို မျက်မြင်သက်သေများရှေ့တွင် လက်မှတ်ရေးထိုး၍ အပ်နှံခဲ့ပါသည်။ ထို့နောက် ကျွန်မမဖြူဖြူမောင်တို့ အခင်းဖြစ်ပွားရာတွင် မျက်မြင်သက်သေအဖြစ်ပါဝင်သော (ဘာသာခြား)ဦးဝင်းဟန်မှ ရိုက်သွားသော ချမ်းမြသာစည်ရပ်ကွက်၊ မြသီတာရပ် အကွက်(၅၀၀)နေ ဦးကျော်နိုင်(ဘ)ဦးလှမောင် အောက်ပါ အတိုင်း ရှင်းလင်းတင်ပြအပ်ပါသည်။ ကျွန်တော့်အား ၂၀၁၄ ခုနှစ်၊ နိုဝင်ဘာလအတွင်း မန္တလေးမြို့ တံခွန်တိုင် ဈေးတန်းရပ်နေ(တရားခံ)ဦးဝင်းဟန်ဆိုသူမှ ကျွန်တော်၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ မန္တလေးမြို့(သစ္စာရွှေပြည်)ဆရာတော် ကျောင်းတိုက်သို့ရောက်ရှိလာပြီး အစ်ကိုဖြစ်သူအား(တရားခံ)ဦးဝင်းဟန်မှ ကျွန်တော့်အား ၄င်းဘက်မှမျက်မြင် သက်သေအဖြစ် ကူညီလိုက်ပါထွက်ဆိုပေးရန် လာရောက်စည်းရုံးခဲ့ပြီး ကျွန်တော်ကလက်မခံသဖြင့် ကျွန်တော့ အား ရန်ညှိုးဖွဲ့ကာ လိုက်လံနှောင့်ယှက်ခဲ့ပါသည်။ ကျွန်တော်ငယ်စဉ်က မိဘဘိုးဘွားများထံမှ လက်ဆင့်ကမ်း အမွေဆက်ခံခဲ့သော အဘိဓမ္မာတောင်သာ ဆေးပညာဖြင့် အကြောပြေလိမ်းဆေး၊ အကြိတ်ကျေဆေးအား မေတ္တာဖြင့် ကုပေးနေပါသည်။ ၄င်းတရားခံဖြစ်သူမှ ကျွန်တော့အား အနောက်တိုင်း တိုင်းရင်းဆေးဝါးများ သုံးစြွဲ၍ ဆေးကုသလျက်ရှိကြောင်း စွပ်စွဲတိုင်ကြားခဲ့သဖြင့် တိုင်းရင်းဆေးဦးစီးဌာန တိုင်းဦးစီးမှူးက (၁-၁၂-၂၀၁၄) ရက်နေ့က တစ်ကြိမ်(၂၈-၄-၂၀၁၄)ရက်နေ့တွင် ထပ်မံစစ်ဆေးခြင်းခံရသဖြင့် အဖြစ်မှန်ပေါ်ပေါက်စေ ရန် ရှင်းလင်းတင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဘာသာခြား(တရားခံ)မှ ကျွန်တော့အား အမျိုးမျိုး၊ အကြိမ်ကြိမ်နှောင့်ယှက်နေ၍ အကြိမ်ကြိမ်ဖြေရှင်းနေရသောကြောင့် မိမိစီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ ဘာသာရေး လုပ်ငန်းများအပေါ် ထိခိုက်နစ်နာစေလျက်ရှိပါသည်။
ထို့နောက် တရားခံ ဦးဝင်းဟန် ကျူးလွန်ထားသော အမှုဖိုင်တွဲကို (၄)လကျော်ကြာအောင် အမှုကျန့်ကြာအောင် ပြုလုပ်ထားသော ဥပဒေဝန်ထမ်းများနှင့် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေးဥပဒေရေးရာ တိုင်းကြားစာဌာန (နေပြည်တော်)မှ(ဦးမြင့်စိုး)အား အရေးယူပေးပါရန်နှင့် ၄င်းအမှုတွဲကို ချမ်းမြသာစည်မြို့နယ်(ဥပဒေ)အရာရှိ (တာဝန်ခံ)ဦးလှမျိုးအောင်ထံမှ တစ်ဆင့် အမှတ်(၁၀)ရဲစခန်းသို့ (၅-၅-၂၀၁၅) ရက်နေ့တွင် ပြန်လည် စိစစ်ပေး ပါရန်ဟူ၍ ၄င်းအမှုဖိုင်တွဲပြန်လည်ရောက်ရှိပါသည်။ အဆိုပါပြန်ကျလာသည့်ဖိုင်တွဲမှ(ဘာသာခြား)တရားခံမှ ထွက်ဆိုထားသော စကားများတွင် ကျွန်မအား သူ့မိန်းမပါ။ သူနဲ့လက်မှတ်ထိုးထားတာပါ။ ယခု ကျွန်မ မိသားစုပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ကိုလည်း သူဝယ်ပေးထားတာပါ။ သူ့အိမ်ပါဟူ၍ မဟုတ်မမှန်ပြောဆိုပြီး မည်သည့် စာရွက်စာတမ်းမှ ခိုင်မာအောင် မပြနိုင်ပဲနဲ့ ကျွန်မသည်လည်း သူနဲ့မည်သို့မျှ မပတ်သက်ကြောင်း၊ မည်သည့် လက်ထပ်စာချုပ်မှ မရှိကြောင်း၊ ကျွန်မတို့ ပိုင်ဆိုင်သည့် အိမ်ဂရမ်မှာလည်း ကျွန်မ၏မိခင်ဖြစ်သူ အမည်ပေါက်ဖြစ်ကြောင်း၊ အမှတ်(၁၀)ရဲစခန်းတွင် မိတ္တူများကိုလည်း ပေးထားပါသည်။ ယခုအခါ ပြန်လည်စစ် ဆေးမှုများ ပြုလုပ်ရာတွင်လည်း (တရားခံ)မှ ရဲစခန်းသို့ ရောက်ရှိလာမှုမရှိဘဲ အမှတ်(၁၀)ရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိ များသည်လည်း ထို(ဘာသာခြား)တရားခံဦးဝင်းဟန်နှင့် ပူးပေါင်း၍ ကျွန်မ၏အမှုတွဲပုဒ်မများအား ပြည့်စုံစွာ ပြန်လည်ထည့်ထားခြင်းမရှိဘဲ (၃၇၆-၅၁၁)ကို ချန်၍ ယခုအခါတွင်(၂၉၄-၄၅၁)ပုဒ်မသာ တပ်ထားပေးပါသည်။ သို့ဖြစ်ပါ၍ ဈေးတန်းရပ် အိမ်အမှတ်(၃၂၄)နေ ဦးဝင်းဟန်နှင့်အတူ ပူးပေါင်းသည့် အစိုးရဝန်ထမ်းများအား ပြင်းပြင်းထန်ထန် အရေးယူပေးကြပါရန် ကျွန်မ မဖြူဖြူမောင် မှ ရိုသေလေးစားစွာဖြင့် အသနားခံ တင်ပြအပ် ပါသည်။
တရားခံနှင့်အတူ ပူးပေါင်းသော(ပျော်ဘွယ်)မြို့နယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ပြည်သူ့လွှတ်တော် တရားစီရင်ရေး ဥပဒေရေးရာနှင့် တိုင်ကြားစာများ၊ အသနားခံစာများ၊ စိစစ်ဆောင်ရွက်ရေး ကော်မတီဌာနတွင် (တရားခံ)၏ အစ်ကိုဖြစ်သူ(ဦးမြင့်စိုး)သည်လည်း အစ္စလာမ်ဘာသာဝင်ဖြစ်နေပါသဖြင့် မြန်မာနိုင်ငံ၏ ဥပဒေကိစ္စရပ်များကိုပါဝင်စွက်ဖက်နေ၍ တရားခံနှင့် မတရားပူးပေါင်းကာ (၃၇၆-၅၁၁)ပုဒ်မကို ချေဖျက်၍ တရားခံဘက်မှ မတရားရပ်တည်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်ဥပဒေကို မလေးမစားပြုလုပ်ခြင်း၊ နိုင်ငံတော်၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို ကျဆင်းအောင်ပြုလုပ်နေခြင်းတို့ကြောင့် ၄င်းအစ္စလာမ်ဘာသာဝင် ဦးမြင့်စိုးအား ထိရောက်စွာ အရေးယူပေးပါ ရန် တိုင်ကြားအပ်ပါသည်။
from → Burma, MYANMAR, U WIRATHU
← !! #ဆရာဒေါက်တာလှိုင်မြင့်ရဲ့ #အင်မတန်ကောင်းမွန်တဲ့ #သုံးသပ်ချက်
#BURMA #Ministry of #Foreign #Affairs #statement on #migrant #boat #crisis →